Atahorana Hikatona Ny Anjerimanontolon’i Pôrtô Rikô Taorian’ny Fandalovan’ireo Rivodoza Irma Sy María · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Janoary 2018 12:58 GMT
Ny Anjerimanontolon'i Pôrtô Rikô. Sary: Alan Levine. Attribution 2.0 Générique (CC BY 2.0)
Raha tsy misy fanamarihana mifanohitra aminy, mandeha mankany amin'ireo pejy amin'ny fiteny espaniôla daholo ny rohy rehetra amin'ity lahatsoratra ity.
Efa ela talohan'ny nandravaravan'ireo rivodoza Irma sy María an'i Pôrtô Rikô tamin'ny septambra 2017 no efa niatrika olana hafa ilay hany toeram-pampianarana amin'ny ambaratonga ambony tokana ao amin'ilay vondronosy: ny fihafiana. Ankehitriny, manahy ireo olom-pirenena sasantsasany fa hataon'ireo tomponandraikitra ho fialantsiny ireo loza voajanahary vao haingana ireo mba handraisana fepetra vao mainka henjana mikasika ny Anjerimanontolon'i Pôrtô Rikô (UPR).
Amin'izao fotoana izao, miady hevitra mikasika ny havesatry ny trosa 74 lavitrisa dolara sy ny 49 lavitrisa dolara amin'ny adidy mikasika ny fisotroan-dronono ny faritra amerikana ao Pôrtô Rikô, vokatr'ireo fihemorana ampolo taona maro, ny famoahana ireo trosa sy ireo raharaha ara-toekarena tsy ara-dalàna, ary noho ny sata maha paradisan-ketra azy. Ny Kôngresy no nametraka ny rafitra lalàna izay nahatonga ireo fampiharana ireo ho nety ary nahatonga fiavahana iray ho an'i Pôrtô Rikô teo amin'ny lafiny lalànan'ny hetra amerikana. Antony izay mitarika olona marobe hanamafy fa trosan'ny fanjanahantany avy amin'ny tenany ny trosan'i Pôrtô Rikô.
Mba hanandramana hiatrehana ny krizy ara-bolan'i Pôrtô Rikô, nandany lalàna iray natao hoe PROMESA [ang] ireo mpanao lalàna amerikàna, izay namorona komity iray tsy nofidiana ho mpanaramaso, ary zotra iray hanavaozana ny trosa. Nanao sonia volavolan-dalàna iray ny filoha teo aloha Barack Obama tamin'ny volana jona 2016 ary noterena napetraka tao Pôrtô Rikô ny Fiscal control Board (Filankevitra Fanarahana maso ny hetra), tsy nasiana fiheverana ny hevitr'ireo vahoaka tao Pôrtô Rikô izay, na teo aza ny sata maha-olom-pirenena amerikàna azy ireo, dia tsy voasolo tena ao amin'ny Kôngresin'i Etazonia ary tsy afaka mandray anjara akory amin'ireo fifidianana filoham-pirenena amerikàna.
Fantatra tamin'ny alalan'ireo fepetra fitsitsiana ny asan'ny Fiscal Control Board ary ny UPR dia anisan'ireo andrim-panjakana iharan'ireo fampihenana tetibola henjana dia henjana, ny fampihenana sy ny fampivondronana ireo toeram-pianarana ary ireo fandaharam-pianarana akademika, ny fampitomboana ireo saram-pianarana eny amin'ny anjerimanontolo ary ny fampihenana karama. Toy ny efa vonona tsara mihitsy mba hanaraka [en] ireo fepetra ireo ny fitantanana ny UPR sy ny governemanta. Miaraka amin'ireo honohono mikasika ny fanomezana ho an'ny tsy miankina ny fitantanana ny Electric Power Authority (PREPA) ao Pôrtô Rikô, atahorana koa ho tahaka izany no hiafaran'ny UPR.
Na izany aza, ampahany betsaka amin'ireo mpianatra sy mpandraharaha ao amin'i UPR no manohitra ireo fepetra ireo, araka ny avoitran'ilay fitokonana roa volana notarihan'ireo mpianatra tany am-piandohan'ity taona ity.
Rivodoza, tetika iray mba hampiharany ny drafitr'izy ireo
Saingy namely mafy tokoa an'ilay vondronosy [fr] ireo rivodoza Irma sy María: 11 ireo toeram-ponenan'ny mpianatra an'ny UPR no niharam-pahavoazana goavana. Taorian'ny tafiotra mahery María, notombanan'ny UPR ho hatramin'ny 118 tapitrisa dolara [fr] ny fahavoazany. Ny UPR-Humacao, heverina ho ny toeram-ponenana tena trà-pahavoazana mafy indrindra, no tena akaiky ilay faritra nidiran'ny mason'ilay rivodoza hankao Pôrtô Rikô. Teo anelanelan'ny rivodoza Irma sy María, nakatona nandritry ny herinandro dimy na enina, na mety nihoatra izany aza, ireo toerana fonenan'ny mpianatra.
Talohan'ny nanapahan'ny UPR hevitra hanokatra indray ireo toerana fonenana ao aminy, marobe ireo anjerimanontolo amerikana, toy ny Tulane University [en] sy ny Brown University [en], ary hatramin'ireo anjerimanotolo tsy miankina ao Pôrtô Rikô, no nametraka fandaharanasa mba hanomezana fahafahana ho an'ireo mpianatra tra-boina ho afaka mamarana ny enimbolany sy hanohy ny fianaran'izy ireo eny anivon'ny sekoly nisy azy. Tamin'ny fotoana nanokafana indray ny UPR, mbola feno korontan-javatra ireo toerana fonenana, no sady feno holatra, tapaka ny jiro, tsy nisy rano fisotro, nikatona ny toerana famakiamboky ary nahitàna fahasimbana daholo ireo toerana fanaovana fikarohana hatramin'ny efitrano fianarana, ireo birao sy habaka natao ho an'ny daholobe.
Ny fitambaran'ireo singa rehetra ireo dia mety hiteraka olana ho an'ny UPR izay mety hamoy ampahany betsaka amin'ireo mpianany, ary hitondra azy aminà toedraharaha sarotra araka izay iantsoan'ilay Kanadiàna vavy, mpanao gazety Naomi Klein [fr] azy hoe tetikadin'ny dona mihatra [en] : «tetika henjana iray ampiasàna ny fahaverezan-kevitry ny olona taorian'ny dona iray niraisan'ny rehetra […] mba hampanekena fepetra henjana eny ifotony hanomezana tombony ireo orinasa». Tao amin'ny Facebook, naneho hevitra [en] ireo mpikambana ao amin'ny tontolon”ny fampianarana, toa an'i profersora Maritza Stanchich ao amin'ny UPR-Río Piedras :
TANDREMO: Na ataontsika aza fa hoe mihevitra ny hanao ny tsara ny sasany, ny fandraisana andraikitra ikendrena hanomezana fampianarana ho an'ireo mpianatra any amin'ireo faritra voadonan'ny rivodoza, any amin'ireo fanjakana toa an'i Flôrida, dia mety koa hiafara aminà fikorontanana amin'ny hoavy ho tafiditra ao anatin'ilay tetikadin'ny dona mihatra amin'ny UPR. Na izany na tsy izany, ny Tulane University tsy tafiditra anatin'izany tetika izany, raha izay no ilazàna azy, talohan'ny rivodoza Katrina [izay nandravarava ny morontsiraka amerikàna tamin'ny 2005]. Takatro ny faniriana miabo ao anatin'ireo fandraisana andraikitra natao ho an'ny mpianatra eto amintsika ireny, saingy heveriko fa angamba tsy ampy fiheverana ihany izy ireny ka tsy ho afaka ampiasaina amin'ny fomba mamoa-doza ho an'ny UPR. [Fanamarihan'ny mpamoaka lahatsoratra: fanehoankevitra natao ho hitan'ny rehetra tao amin'ny Facebook ilay izy, napetraka tamin'ny 29 septambra, izay niteraka fifanakalozandresaka be avy eo]
Indroa mahita ny maizina araka izany ny UPR. Azony natao ny nandray fanapahankevitra tsy hanohy ilay enimbolana, noho ny resaka fotoana ilaina hanarenana amin'ny laoniny sy hahita ampahany amin'ireo mpianatra ao aminy hitodika hankany amin'ireo anjerimanontolo any Etazonia, ary ireo anjerimanontolo tsy mainkina sy ireo kolejy ao amin'ny nosy, na handray fanapahankevitra ny hiverina hisokatra, izay efa nataony rahateo; ary hahita ampahany amin'ireo mpianany hilefa, satria tsy afaka narenina tanteraka sy araka ny tokony ho izy ilay anjerimanontolo.
Nefa, araka ny filazan'ny mpianatra marobe sy ireo mpiasa, tsy nanao afa-tsy ny vao mainka nanaratsy ny toedraharaha efa nisy ireo rivodoza. Efa trà-pahasahiranana ny UPR noho ny kolikoly sy ny tsy fahaizana mitantana nanamarika azy nandritra ny taona marobe nitantanana azy, ary ny olan'ny trosa, araka ny notsipihan'i Verónica del Mar, mpianatra ao amin'ny UPR-Río Piedras :
Tsy nisoratra tao amin'ny anjerimanontolo aho tamin'ity taona ity, tsy hiverina any aho izany amin'ny alatsinainy. Saingy vakiako izay soratanareo, henoko ianareo ary mahatsiaro ho mitebiteby aho, malahelo, sahiran-tsaina…. Fa indrindra indrindra, tezitra aho, satria raha toa ka nisoratra anarana aho dia tsy maintsy ho nisafidy ny hiasa na hianatra. Ny misakafo na mandray fiara fitanterana. Mety teo ampisafidianana miaraka amin'ireo namana aho, hoe trano fonenana toa inona misy rano fisotro no hanome ho anay toerana mendrika mba hakàna aina sy “hianarana”.
Lasa any amin'izay mety ho fahafahana azo sainina ny saiko, dia mbola tezitra bebe kokoa indray aho. Manana fialantsiny ampy azy tsara na ny governemanta na ny mpitantana ny anjerimanotolo mba hanohizana ny fanomezana ny anjerimanotolo ho an'ny tsy miankina, ary ny fahafahana mahazo fanabeazana. Nanome azy ireo ny vintana hamitàny ny drafitra novolavolainy ilay fandalovan'ny rivodoza Maria : fanakatonana ireo toerana fonenan'ny mpianatra, fanondrotana ny sarampianarana, fampihenana ny tohana ara-bola sy ireo fanampiana, famelàna ireo tranobe sy toerana fonenan'ny mpianatra, raha lazaina amin'ny teny hafa dia ho ireo olona manana fahafahana ara-bola sisa no ho afaka hiditra amin'ny UPR.
« Araraotin'izy ireo ny loza »
Vao haingana, nangatahan’ny filankevi-pitantanan'ny UPR ireo zokiolona rehetra ao amin'ny anjerimanontolo mba hiverina handinika ny ambaindain'ireo fandaharam-pampianarana akademika mba hampihenàna araka izay tratra ny antontam-bola ilaina, ary hanolotra sosokevitra vaovao momba izay mety ho dingam-piofanana ho arahana ho anà fandaharam-pianarana vitaina anatin'ny taona roa .
Tao amin'ny UPR-Mayagüez, izay haingana tokoa no nampiharan'ny rektorany ny fanapahankevitry ny filankevitra, mampiahiahy ny profesora Jorge Schmidt sy ireo mpikambana hafa ao anatin'ny fikambanan'ny mpampianatra sao dia hanome vahana ny tombombarotra ilay fanapahankevitra raha ampitahaina amin'ny lentam-panabeazana sy ny fiharefoan'ny anjara andraikitra raisin'ilay toerana fianarana, amin'ny maha-anjerimanontolo sy toerana fanaovana fikarohana azy :
Manararaotra ny loza izay mandalo eo amin'ny firenena izy ireo mba hanafoanana ny fanoherana rehetra mety hatao amin'ny fitsipik'izy ireo tsy ara-akademika mikatsaka ny hamadihana ny UPR ho ivontoeram-piofanana ho an'ireo asa teknika.
Ny UPR no hany toeram-pibeazana ambony natao ho an'ny daholobe ao Pôrtô Rikô. Satria ny 46,1 % amin'ireo mponina ao [en] no miaina ambany fetran'ny fahantràna (isanjato mety efa nitombo taorian'ny fandalovan'ny rivodoza María), ary ny fahafahana ara-bola dia olana iray ho an'ny ankamaroan'ireo mpianatry ny anjerimanontolo ao Pôrtô Rikô na ireo olona maniry hianatra any, ny fanomezana azy ho an'ny tsy mainkina dia hibahana ampahany betsaka amin'ny vahoaka tsy hahazo fanabeazana azo ihorirànana ao amin'ilay vondronosy.